I-YouTube izokuvumela ukuthi uphume iziteshi ongasafuni ukuzibona kusikisela - I-TELE RELAY
Accueil » I-TECH & ITELECOM »I-YouTube izokuvumela ukuthi uphume eziteshini ongafuni ukuzibona kusiphakamiso
I-Google ikhipha ukubukeka okusha kwe-YouTube. Ngaso leso sikhathi, kuphakanyiswa inketho entsha: kuvumela ukususa ezincwadini zekhaya izincomo ongazithandi, noma ngaphezulu.
Ekhasini lasekhaya le YouTubeuqaphele impela ukuthi akuzona kuphela iziteshi ozilandelayo ezibekwa phambili uma uku-akhawunti yakho. Kukhona neziteshi ezinconyiwe, ngokuya ngomsebenzi wakho epulatifomu yevidiyo. Leli yithuba elihle lokuthola okuqukethwe okusha, kepha mhlawumbe ungathanda ukukuxazulula.
Izindaba ezimnandi ukuthi i-Google izonikeza abasebenzisi ithuluzi eliphumelela ngokwengeziwe lokuhlunga lokho ofuna ukukubona futhi ikakhulukazi ongakuboni ekhasini lasekhaya. Ekukhetheni kwesiteshi ngasinye esiphakanyisiwe ekhasini eliyikhaya (izinketho ezifinyeleleka ngokuchofoza ku-ellipses mpo lapho uzulazula ngevidiyo ngesikhombisi segundane), manje kuzoba nenkinobho yokunikezela.
Inketho etshela i-YouTube ukuthi iyeke ukululeka isiteshi esithile.
Hlunga ekhasini lasekhaya
« Ngemuva kwalokho, akusafanele ubone amavidiyo kulesi siteshi ekhasini eliyikhaya le-YouTube. , Ubhala inkampani yaseMelika, eposini lebhulogi likaNovemba 7. Leli nje ikhasi lasekhaya: amavidiyo angahlala etholakala njengengxenye yosesho, ngokuvakashela ikhasi lesiteshi noma ithebhu yezitayela uma lithandwa kakhulu.
Uma usebenzisa uhlelo lokusebenza leselula le-YouTube, kungenzeka ukuthi usuwele le nketho, ngoba selitholakala kusukela kuleli hlobo e-Android naku-iOS. Yiluphi ushintsho lapha ukuthi manje lunwetshelwe enguqulweni yewebhu yesikhulumi. Kuza nokubukeka okusha kwe-YouTube, okukhishwa, okuqukethe izithonjana zamavidiyo ezikhulayo.
I-YouTube / Montage Numerama
Lesi sihloko sivele kuqala https://www.numerama.com/tech/568119-youtube-va-vous-permettre-devacuer-les-chaines-que-vous-ne-voulez-plus-voir-en-suggestion.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=568119